Izikhathi zokulethwa kweMac Pro zisengozini ngenxa ye-coronavirus noma i-Covid-19 | Ngivela kwa-mac
Izikhathi zokulethwa kweMac Pro zisengozini ngenxa ye-coronavirus noma i-Covid-19
I-coronavirus nayo esanda kuqanjwa njenge-Covit-19 kuthinta ezingeni lomhlaba wonke ngaphandle kokuwela ngokulambisa imingcele yaseChina futhi lokhu kuguqulela ezinkingeni zazo zonke izinhlobo. Okwaziwa kakhulu ezweni lethu namuhla ngeshwa "isiphithiphithi" esifakwa emcimbini omkhulu kunayo yonke yocingo oluphathekayo owawuseBarcelona. Kusukela manje ngoFebhuwari 12 nangemva kokuhoxa ngenxa yokwesaba iCovit-19 yizinkampani ezimbalwa ezinkulu ezihambele lo mcimbi, uhlala kunjalo, kepha umgubho wawo usengozini impela.
I-Chinese Formula 1 GP ikhanseliwe emahoreni ambalwa adlule, izibikezelo zokukhula kweChina zimile, ukuthengiswa kwemigqomo yezinto ezingcolile ezweni lase-Asia kungancipha kakhulu, izinkampani zezimoto zibona ukuthi lokhu kuqhamuka kwe-Wuhan coronavirus eChina kuzothinta kanjani ngqo ekukhiqizeni kwakho futhi ngakho-ke inqwaba yezinkinga ezihlobene. Ngaphezu kwalokho, futhi kungenziwa kanjani ngenye indlela, izinkampani zobuchwepheshe ezikhiqiza izinto nezinto zokusebenza zezinkampani emhlabeni jikelele ziyamiswa, ngakho-ke lokhu kuyazithinta nazo ngqo njengoba kunjalo nge-Apple.
Kulokhu, amafektri eMac Pro okubekwa phambili kuwo ukuhlinzeka imakethe yase-US atholakala ezweni elifanayo ngakho-ke akumele kube khona ukubambezeleka ngaphezu kwalokhu okubikezelwe, kepha esimweni somhlaba wonke la ma-Mac Pro ahlanganiswe eChina kanye sabona izinyanga ezimbalwa ezedlule, ngakho-ke izikhathi zokulethwa kwale mishini enamandla nazo zisengozini njengamanje ngenxa yegciwane elithinta izwe. IMacBook Pro, iMac noma iMac Pro nayo izolethwa kamuva ngaleso sikhathi umsebenzisi enza ukumisa ngokwezifiso weqembu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » Izikhathi zokulethwa kweMac Pro zisengozini ngenxa ye-coronavirus noma i-Covid-19
I-Podcast 11x22: I-coronavirus ifinyelela kubuchwepheshe
Amahemuhemu abeka i-AirPods Pro Lite etafuleni